နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > hardware Tools များ > အတိုင်းအတာ Tools များ > သံမဏိအနန္တတန်ခိုးရှင်
အစိုးရသောမင်းတို့ရှည်လျားကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်အရွယ်အစား၏ကျယ်ပြန့အတွက်ပါပြီ။ တချို့ကသူတို့တီထွင်ခဲ့ကြပြီးကတည်းကလည်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်wooden.ÂPlasticsÂပါ၏ သူတို့အရှည်အမှတ်အသားများအစားbeingÂကျမ်းပြုဆရာနှင့်အတူပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။ သတ္တုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်အသုံးပြုရန်ပိုမိုတာရှည်ခံသောမင်းတို့အတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သတ္တုအစွန်းဖြောင့်လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာအစွန်းကိုထိန်းသိမ်းမယ့်သစ်သားစားပွဲခုံကိုအုပ်စိုးသောမင်းသို့ embedded ဖြစ်ပါတယ်။ အရှည် 12A INA သို့မဟုတ်30ÂcmÂပုံဆွဲထဲမှာကိုကူညီမယ့်စားပွဲခုံပေါ်သိုထားခံရဖို့မင်းအဘို့အအသုံးဝင်သည်။ တိုတောင်းသောမင်းတို့တစ်အိတ်ကပ်ထဲမှာစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အအဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်။
အထွေထွေ Tools များ Flexible Precision သံမဏိစည်းမျဉ်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့တိကျမှန်ကန်ဖတ်ပေးပါသည်။ အင်္ဂါရပ်များ 10 မီလီမီတာတခြမ်းနှင့် 32 & quote အပေါ် 100mm တိုင်းတာ; 64 & quote; ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာ။ 1) ။ အထွေထွေ Tools များအနေဖြင့်သံမဏိအုပ်စိုးသောမင်းကျောင်း, အိမ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး application များအတွက်လျောက်ပတ်သည်။ 2) ။ ဖြောင့်အစွန်းအုပ်စိုးသောမင်းကို 10 နှင့် 100 မီလီမီတာကြားကာလရှိပါတယ်; အနက်ရောင်အမှတ်အသားများခြစ်ရာမပေါ်။ 3) ။ အဆိုပါသတ္တုကိုအုပ်စိုးသောမင်းတစ် tool ကို box ကိုကျောပိုးအိတ်, ဒါမှမဟုတ်ရုံးအံဆွဲထိုသို့စုံလင်သောအောင်, 15/32 လက်မကျယ်ပြန့်တဲ့သေးသွယ်သည်။ 4) ။ သည်အခြားသစ်သားအုပ်စိုးသောမင်းကိုသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်သောမင်းတို့မတူဘဲ, ငါတို့ဥစ်စာကိုခြိုးသို့မဟုတ်ချိုးမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ 5) ။ ဒီထုတ်ကုန်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
15cm, 20cm, 30cm, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်
စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုကြိုဆိုသည်။ ရရှိနိုင် logo ပုံနှိပ်ခြင်း
PP / PVC အိတ် + သစ်သားသေတ္တာသို့မဟုတ်customerâ€™်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ
ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, about25-35 ရက်ပေါင်း
အဆိုပါသံမဏိအနန္တတန်ခိုးရှင်၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
1) ။ သံမဏိအုပ်စိုးသောမင်းကို set ကို 1 အပိုင်းအစ 12 လက်မ (300 မီလီမီတာ) အုပ်စိုးသောမင်းကိုနဲ့ 1 အပိုင်းအစ6လက်မ (150mm) ကိုအစိုးရသောမင်းများပါဝင်သည်
2) ။ မက်ထရစ်နဲ့မှာ Imperial ကျောင်းဆင်းပွဲ; နောက်ကျောဘက်မှာပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာနှင့်အတူ
3) ။ သင့်ရဲ့အဆင်ပြေတိုင်းတာခြင်းအဘို့ကိုရှင်းလင်းရန်အမှတ်အသားများ
4) ။ သင့်ရဲ့ရှည်လျားရေရှည်အသုံးပြုရန်သံမဏိပစ္စည်း
5) ။ 0.9 မီလီမီတာအထူချွန်ထက်အနားမှရှောင်ရှား
လျှောက်လွှာ:တိုင်းတာခြင်း, Promoton, ရုံး, တွင်လည်းကျောင်း, အိမ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး application များအတွက်လျောက်ပတ်သည်။
1. တစ်ဦးချင်း Pack ကိုထည့်သွင်း:PP အိတ်, PVC အိတ်, အင်္ကျီလက်ကဒ်, အရည်ကြည်ဖုကတ်, ဟန်ပေါက်ကဒ်အရောင် box ကိုပလတ်စတစ် box ကို Clam shell ကို, သစ်သားသေတ္တာ
2. အတွင်းဗူး:အဖြူ / အညိုစက္ကူသေတ္တာမှသင့်လျော်သောqtâ€™ y က
3. customerâ€™ s ကိုလိုအပ်ချက်အရ
4. နောက်ဆုံး Pack ကို:ပို့ဆောင်ရေးများအတွက် pallet
ရော်ဘာ Jacket သံမဏိတိပ်တိုင်း